हिजो जस्तो भएपनि | मेरो खेस्रा whatever i feel
२६ साउन २०६६, नेपाल साप्ताहिकको मेरो स्तम्भ “बायाँ फन्को” मा प्रकाशित
“आई हेट पोलिटिक्स्,”
नरमाइलो त के भने समाजका ती वर्गका युवा पुस् ताहरू हुर्कने बेलादेखि नै एउटा अचम्मको मानसिकता बोकेर हुर्केका हुन्छन्। राजनीति वा सरकारी सेवा भनेको उनीहरूको प्राथमिकताको विषय नै होइन। बाबु-आमाले पनि उनीहरूमा अर्कै अपेक्षाका भारीहरू लादिदिएका हुन्छन्। कसरी हुन्छ, ‘प्लस टू’ सकाएपछि अमेरिका, बेलायत वा अस्ट्रेलियातिर छोराछोरी उडून्। त्यसका लागि आफ्नो ह्याउले भ्याउने-नभ्याउने साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति पनि अँगाल्छन् उनीहरू। अनि, उता गएकाहरू सकेसम्म यता फर्केर नआउनका लागि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्छन्। र,त्यहाँ बसेर यो देशको दूरावस्थामा चिन्ता प्रकट गर्छन्। राजनीतिलाई गाली गर्छन् र नेताहरूले देश डुबाए भनेर गोहीका आँसु बगाउँछन्।
“यहाँको जीवन कहाँ सजिलो छ र ? यहाँ त काम नगरी खान पनि पाइँदैन।”
“तपाईंजस्ता मान्छे के गररिहनुभएको छ, त्यहाँ ? तपाईं त यतै आउनुपर्ने हो नि !”
‘नजाऊ छोडी यो देश, आमालाई रुवाएर।’
« भाइले सोध्लान् नि खै दाजु भन्लान्……..
2 thoughts on “हिजो जस्तो भएपनि”
“अचेलका आमाहरू आफ्ना सन्ततिहरू यो देश छोडेर नगएकामा रुन थालेका छन् ।” तीतो सत्य भन्नुभो ब्रजेशजी । विडम्बना !